निराशाको अफवाह फैलाउनेमाथि खुकुरी बज्रिन्छ : रमेश पौडेल - News Portal from Nepal
निराशाको अफवाह फैलाउनेमाथि खुकुरी बज्रिन्छ : रमेश पौडेल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय युवा संघको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पार्टी संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको छ । यसका अन्तर विषयवस्तुका बारेमा जानकारी दिन राष्ट्रिय युवा संघका सहसंयोजक रमेश पौडेलसँग कामना न्यूज डट कमका लागि उज्ज्वल कडरियाले गरेकाे अन्तर्वार्ता :
पार्टी एकतापश्चात् कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको हो ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टै स्कुलिङ, धारा र ट्रेन्डबाट हुर्केका पार्टी हुन् । भलै दुवै कम्युनिस्ट पार्टी थिए । देशको सुशासन र समाजवादको दिशामा जुन प्रतिबद्वता थियो, नेकपा एमालेको ९ औँ महाधिवेशन र माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनले समाजवादको दिशामा जाने कुरा तय गरेअनुसार वैचारिक रुपमा एक ठाउँमा आएका थिए ।
लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । कुनै पार्टीको एकल सरकार थिएन । दुई वा सोभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्रगतिशील र वामपन्थी शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिने, समृद्धिको अभियान प्रारम्भ गर्ने, समाजवादको यात्रा तय गर्ने र सि‌ंगाे नेपालको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अगाडि लैजाने बेला भएको थियो । यसै प्रतिबद्वताका साथ दुवै पार्टीहरू एकबद्ध भई मार्क्सवाद, लेलिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा जनताको जनवादलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाउँदै दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा भएको थियो ।
दुवै पार्टीमा लाखौँ कार्यकर्ता स‌ंगठित थिए । यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय लागेको मान्नै पर्छ । दुवै पार्टीका आ-आफ्ना शैली, तरिका र विषयवस्तु थियोे । यसले समायोजन प्रकियामा ढिलाइ भएको थियोे । जसले गर्दा बाहिर असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ ।
खाना पकाउँदा भाँडाकुँडा ठोकिएर निस्केको आवाजलाई भाँडा फुटेको भनेर बुझ्नु हुँदैन । प्रशव पीडालाई मृत्युको पीडा भनेर बुझियो भने नयाँ सृष्टि हुन सक्दैन ।
कार्यकर्ताको असन्तुष्टि पार्टी सिद्धियाेस्, बिग्रियोस्, भत्कियोस् भन्ने हैन । अझ बलियो, मजबुत होस् भन्ने हो । मुलुक, जनता, श्रमजिवी, आम न्यायप्रेमी जसले न्याय र मुक्तिको खातिर जीवनभर आफूलाई संकल्पित तथा सर्मपित गरे । ती कार्यकर्ता र नताहरूले सरकार, पार्टीले गलत बाटो लिने कुरामा सशंकित भई गरेको खबरदारीलाई असन्तुष्टि भन्न हुँदैन । खबरदारीले नै पार्टीलाई उचित बाटो देखाउँछ ।
तपाईलाई असन्तुष्टिको परिणाम उपनिर्वाचनमा देखिएको जस्तो लाग्दैन ?
भक्तपुर, धरानलगायत केही चर्चित ठाउँमा सोचे जस्तो परिणाम आएन । यसको मूल कारण कार्यकर्ताको असन्तुष्टि होइन, पार्टीको व्यवस्थापन कमजोर, टिकट वितरण र कार्यकर्ताको आन्तरिक विषय प्रमुख तवरबाट हुन नसक्नु नै हो । सही ढंगले विषय पहिचान गर्न नसक्दा यस्ता परिणाम पहिला पनि आएको थियो ।
यसलाई पार्टीप्रति असन्तुष्टि र एकता विरोधी तत्वको रुपमा लिनु हुँदैन । कार्यकर्ताले एकता गरेको चित्त बुझाएका छैनन् भनेर बुझ्यौँ, छलफल चलायौँ र व्याख्या गर्याैँ भने बुझाइ गलत हुनेछ ।
एकीकरण पश्चात् युवा संघ गुपचुप ढंगले बसेको छ, यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
जनताकाे जिविकाबारे युवा संघ नेपाल कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएको संगठन हो । युवाको सामुदायिक मुद्दामा हामी निरन्तर बोल्दै आएका छौँ । पार्टी जस्तै युवा संघमा पनि एकताको प्रक्रिया छ । म र दिपशिखा जीमाथि यो संगठन र आम कार्यकर्तालाई एकताबद्व बनाएर सम्बोधन गर्नु पर्ने बेला भएको छ । पर्याप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि संघर्ष गर्नु पर्ने अभिभारा छ । यसका लागि पहलकदमी लिने कार्यभार हामीलाई दिइएको छ । संगठन चुस्तदुरुस्त राख्नु पर्ने छ ।
हामीले केन्द्रीय कमिटीको एकता गरिसकेका छौँ । संयोजक र सह संयोजक चयनको प्रक्रिया ४० जिल्लामा टुंगिने अवस्थामा छ । प्रदेश कमिटी, विभाग र अन्य निकाय फाल्गुनभित्र टुंगिने छन् । त्यसपछि अधिवेशन र महाधिवेशनको दिशामा युवा संघ जान्छ ।
युवा संघ नेपालका नेता जनतामुखी भन्दा नेतामुखी र पदमुखी भएको सुनिन्छ त ?
यो आरोप म सहर्ष स्वीकार्छु । हरेक मानिस आफ्नो पोजिसन के हुन्छ, भनेर सोचिरहेको हुन्छन् । कमाउँछु कि कमाउँदिन ? धनी भइन्छ कि भइँदैन ? ठूलो पद पाइन्छ कि पाइँदैन ? घर गाडी हुन्छ कि हुँदैन ? अरुको नजरमा नेता भइन्छ कि भइँदैन ? कसरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने भनेर चिन्तित बनिरहेका हुन्छन् ।
समाजप्रति त्याग र समर्पण घट्दै छ । यो पूँजीवादको विशेषता हो । पूँजीवादले व्यक्ति केन्द्रमा राख्दछ र व्यक्तिले आफ्नो फाइदालाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति रहेको हुन्छ । हामी जुन प्रणाली, व्यवस्था, सिद्धान्त र विचारमा समाजलाई राखेका छौँ । त्यसले अवश्य युवा संघलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।
अहिले हामी पूँजीवादको चरणमा छौँ । यस चरणमा व्यक्तिले पैसा, शक्ति र पदलाई प्रमुख रुपमा लिएको हुन्छ । यसकारण युवा संघमा पनि पूँजीवादको प्रभाव पर्न सक्छ । यसबाट मुक्त हुन हामीले स्कुलिङ गर्नु पर्दछ, सिकाउनु पर्छ, बाटो क्लियरेन्स गर्दै समाजवादको दिशामा युवा आन्दोलनलाई नेतृत्वकारी आन्दोलनको विकास गरी समाजवादको यात्रा पूरा गर्न उत्प्रेरित हुनु पर्दछ । भरपर्दाे र विश्वासिलो देशका खम्बा युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै देश, सरकार र पार्टी हितमा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई युवा संघले सम्बोधन गर्न नसकेको हो ?
सरकारसँग सबै जनता असन्तुष्टि छैनन् । यो कुरा म खारेज गर्न चाहान्छु । खण्डन गर्दछु । सरकारको राम्रो कामलाई किन राम्रो भन्न सकेको छैनौँ । यसका कारण खोज्न जरुरत छ । विकासका कुरा, सुशासन र दिगो शान्तिको दिशामा देश लैजाने र घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेअनुरूप काम भइरहेको छ । तर, केही भएको छैन भनिन्छ । पहिले बेथिती हुँदा राम्रो देख्नेले देश समृद्धितर्फ लम्किरहँदा, सुशासनले जरो गाड्न लाग्दा पनि केही नभएको देख्नु पनि पूँजीवादको अर्को प्रभाव हो ।
केही मान्छेहरू मेसिनरिज्, पेनिट्रेड र इन्जेक्टेड छन् । कुनै विषादी दिमागमा घुसाइएका छन् । र त्यसको प्रभाव परेर मुखबाट बमन गरिराखेका छन् । समाज परिवर्तनका लागि केही भएन, बर्वाद भयो, भयावह भयो, धर्ती भासियो, आकास झर्यो भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्दै छन् ।
खराब चिन्तनले निराशाको भारी बोकेर देश र समाजलाई निराशाको दिशामा लैजान्छ । निराशाले डिप्रेसनतर्फ डोर्‍याउँछ र मुत्युलाई निम्ताउँछ । निरासाको अफवाह फैलाउने काम योजनाद्वारा सञ्चालित केही मानिसको झुण्डले गरिराखेका छन् ।
म भष्ट्रचार गर्दिनँ, र गर्न पनि दिन्नँ भनेर प्रधानमन्त्रीको वाचाले मूर्तरुप लिन सुरु गरिसकेको छ । पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारलगायत भष्ट्रचारी कानुनी दायरामा आउँदै छन् । देश सुशासनतर्फ अघि बढेको छ । समृद्धिले बाटो अँगालेको छ । घोषणा पत्रका वाचा पूरा हुँदै छन् ।
दाउरा लिन वनमा जाँदै छौँ भने पहिला खुकुरीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र धार लाउने, उध्याउने काम हुन्छ । अहिले हामी धार लगाउँदै, उध्याउँदै छौँ । सिद्धिएपछि त्यो खुकुरीले हानिन्छ, काटिन्छ । निराशाको अफवाह फैलाउनेमाथि त्यो खुकुरी बज्रिन्छ । भष्ट्रचार र बेथितीमाथि हाम्रो हतियार प्रयोग हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यकर्ता परिचालित हुन्छन् ।
अहिले युवा संघसँग ठोस योजनाहरू छैनन् ?
योजना प्रशस्त मात्रामा छन् । देशभरका संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै छौँ । शान्ति र समृद्धिका लागि युवा परिचालित गर्दै छौँ । युवाको रोजगारीका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै छाैँ । सिंगाे युवा आन्दोलनलाई आशा र उर्जाको आन्दोलनमा विकास गरी अगाडि बढाउने छौँ । यो दशकलाई युवा दशकका रुपमा लैजान पहलकदमी आवाज उठाउँछौँ ।
हामी भाग्यमानी देशका युवा हौँ । जहाँ युवाको जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत छ । अन्य देशमा युवाको जनसङ्ख्या न्युन छ । अब नेपालमा २० वर्षभित्र ४० प्रतिशत युवाको जनसङ्ख्या हुने छैनन् । यो दशकलाई युवाको दशकमा परिणत गर्ने प्रयास गर्छौं । युवा परिचालनको अभियान सूत्रबद्ध रुपमा बढाउँछौँ । युवालाई मुलुक समृद्ध बनाउन परिचालन गर्छौं।
समृद्धि, सुशासन र युवाका मुद्दाहरू युवा संघको प्रमुख विषय हो ।